R/W Kheyre iyo wasiiro dhowr ah oo goordhow la kulmaya maxaabiista - Caasimada Online
Home Warar R/W Kheyre iyo wasiiro dhowr ah oo goordhow la kulmaya maxaabiista
R/W Kheyre iyo wasiiro dhowr ah oo goordhow la kulmaya maxaabiista
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre ayaa lagu wadaa in goordhow uu kulan la qaato Maxaabiista laga soo daayay Xabsiyada Ethiopia ee Muqdisho la keenay.
Ra’isul wasaare Kheyre ayaa Maxaabiista kula kulmaaya Xabsi ku dhow Dekedda magaalada Muqdisho oo lagu xareeyay Maxaabiistii xalay laga keenay Dalka Ethiopia.
Kheyre ayaa waxaa ku wehlinaaya kulanka tirro Wasiiro ah, waxaana lagu wadaa inuu kala hadlo dhibaatooyinka heysta, Caafimaadka iyo waxyaabaha ay ka filankaraan dowlada Somalia, maadaama ay dhowr sano u xirnaayen xabsi sabab la’aan ah.
Waxaa sidoo kale, Xabsiga ku sugan Suxufiyiin oo la doonaayo inay wareysiyo lasameeyan Ra’isul wasaare Kheyre iyo Wasiirada wehlinaaya, si waxbadan looga ogaado xaalada Maxaabiista iyo qorshaha dowlada.
Sidoo kale, ehelada Maxaabiistaan Soomaliyeed ayaa la qorsheeynayaa in dhawaan fursad loo siiyo si ay ula kulmaan.
Geesta kale, Xukuumada Somali ayaa ballanqaaday in waxbadan ay ka bedeli doonto xaalada ay iminka ku jiraan Maxaabiista shalay kasoo degay Muqdisho.